Torolàlana ho an'ny fanamarinana Windows Server: MCSA, MCSE ary MTA | NY
Torolàlana ho an'ny fanamarinana Windows Server MCSA MCSE sy MTA
Ny teboka amin'ny teboka hitantanana ny programa fandaharan'asa Microsoft dia mamolavola ny torolàlana momba ny fampandrosoana amin'ny asa. Ny teboka misy tombotsoa dia teboka ho an'ny fahadiovana tsaratsara kokoa. Tsy maintsy ekena fa maro ireo certificat de Microsoft azo raisina eny an-tsena. Ny fanolorana Microsoft Office dia natao ho an'ny fampiharana ary koa ho an'ny desktop, sehatra famolavolana sy tahiry.
Ity torolàlana ho an'ny certificates rehetra an'ny Microsoft rehetra ity dia manaiky anao Fanamarinana MCSA, Fanamarinana MCSE, Fanamarinana MTA. Ireo fandaharanasa fanamarinana ho an'ny Microsoft dia natokisany nandritra ny taona maro ary navadika ho amina toeram-pitsaboana tena izy. Microsoft dia manamboatra mpitantana, ekipa mpanadina ary ekipa mpanohana amin'ny sehatra rehetra sy ny fampiharana rehetra azo alaina amin'ny Microsoft.
Amin'ny ankapobeny, tokony ho azonao fa ao ambanin'ny Fanamarinana MCP, antsoina hoe MCSA, MCSE ary ireo mari-pahaizana manokana momba ny fahasalamana dia hita. Ny fampiendrehana MOS sy MTA dia tsy mandeha amin'ny etikan'ny MCP. Hamafiso fa tsy misy fanadinana takiana izay heverina ho ilaina amin'ny fanatsarana ny fepetra noraisina etsy ambony.
Fahatakarana ireo fanadinana rehetra
Ny serivisy Microsoft Server cert dia misy MTA, MCSE ary MCSA alalana. Ao anaty MTA Server dia tonga ny mari-pahaizana manokana antsoina hoe IT Infrastructure. Mba hahazoana izany, ny fanantenana dia tokony handalo fitsapana manokana avy amin'ny dimy. Ireo dia mandrakotra ny lohahevitra sy ny faritra toy ny fototry ny fitantanana ny serivisy, ny fitantanana ny rafitra, ny fahafaha-manao sy ny gadgets, ny rahona sy ny filaminana.
Amin'ny MCSA Server dia misy servisy Windows 2008, 2012 ary 2016. Ireo karazana Windows Server ireo dia mitaky fizarana telo ho an'ny tsirairay. Na izany aza dia mila fanadinana roa fotsiny ianao amin'ny Linux amin'ny fanamarinana Azure sy MCSA: Cloud Platform. Ny tsirairay amin'izy ireo dia toa ilaina amin'ny manaraka. Ny Microsoft Database dia midika hoe MCSA, MTA ary MCSE. Ny mta Database MTA dia mila fanadinana iray. Ho an'ny MCSA Database dia ireto no MCSA: SQL Server 2012 / 2014 sy MCSA: SQL 2016. Ilana fanadinana telo izany.
Ny certificat MCSA Desktop dia mampiditra mari-pankasitrahana iray ho an'ny Windows 10 araka ny nambaran'ny tamin'ny 2017 tamin'ny Janoary. Mba hahazoana ny MCSA: Windows 10 dia takiana ianao handalo fanadinana vitsivitsy.
Ny baiko MCSA Apps dia mirakitra mari-pahaizana iray - ho marika manokana, MCSA: Office 365. Fanadinana vitsivitsy no andrasana hahazo izany. Ny Microsoft dia manome ny MOS Office 2016 cert ho an'ny fampiharana Office. MOS 2016 Expert cert dia manaiky ireo izay manana ny ampahany amin'ny sehatra Office Office. Mila manala fanadinana efatra ireo mpifaninana. MOS 2016 Mpampianatra dia mila manala fanadinana enina.
Ny serivisy Microsoft Server dia mifanaraka tsara amin'ny tompo IT izay mifandray amin'ny famolavolana, famolavolana, fametrahana na fitantanana ny fepetra Windows. Mety hampiditra solosaina na gadget mihitsy aza izany. Ireo izay manana fepetra MS dia mameno ny hevitra, ny loha, ny mpandalina ary ny zavatra hafa.
Vao haingana, ny mari-pankasitrahana MCSA, ny mari-pankasitrahana MCSE sy ny mari-pamantarana MTA dia nampitombo ny fahataitairana sy ny heriny. Ireo olona mikatsaka ny fanomanana MCSA na ny MCSA ary ny Microsoft Training dia mifandray amin'ny sehatra toy ny Office 365, Office ary Microsoft Dynamics 365.
Hatramin'ny Martsa 31 tamin'ity taona ity, ny MCSE Server dia nanaraka ny SharePoint, Communication, Private Cloud, Cloud Platform sy Infrastructures, Messaging sy Server Infrastructure ho an'ny Infrastruktur Server, Desktop Enfrastres ary ny Cloud Private dia mila aseho amin'ny MCSA: Windows Server 2012.
Ho an'ny fampifanarahana ny Messaging, Communication and SharePoint dia mila mandray ny MCSA ho an'ny Office 365. Tokony ho azonao atao ny tsy maintsy manao fanadinana roa samihafa mba hahazoana MCSE Server. Ny rakitra MCSE Database dia manana sora-baventy telo atolotra. Ny fanamarinana farany indrindra dia ny MCSE: Data Management and Analytics, nefa ny roa aloha aloha dia MCSE: Business Intelligence sy MCSE: Data Platform. Ny fikarakarana farany indrindra dia mila fanadinana efatra. Ny mozika fanampiny efa mila fanadinana dimy. Ireo fahazoan-dàlana roa teo aloha dia naverina niverina mba hanolotra sehatra ho an'ny MCSE: Data Management and Analytics.
Ny MS Desktop (Microsoft Desktop) dia mifanaraka amin'ny mari-pahaizana MTA, Microsoft Specialist ary MCSA. Ny Microsoft Specialist ao amin'ny Windows 10 dia manantena ny iray hanajanona fanadinana. MTA Desktop fomba manana mari-pankasitrahana irery amin'ny IT Infrastructure. Toy izany koa ny làlana MTA Server izay nodinihintsika mialoha. Ny MTA IT Infrastructure dia mila mandalo fitsapana manokana avy amin'ny dimy manontolo. Ny fanadinana dia eo amin'ny fitantanana ny rafitra, ny portability, ny Windows Server administration, ny fahaiza-manao, ary ny fototry ny rahona sy ny gadget.
Ny Microsoft Developer amin'ny fomba azo antoka miaraka amin'ny MCSD sy MTA. Ny mta Developer certificateur dia mahita ireo mpandray anjara amin'ny sehatry ny fizarana. Ity mari-pankasitrahana ity dia mila mpanohitra mba hahazoana iray amin'ireo telo fanadinana. Ny faritra azo inoana dia ny fampiharana fampiharana HTML5 fampiharana, fampivoarana ny programa sy ny fametrahana fototra momba ny fitsapana.
Tari-dalana feno amin'ny MCSA 2016 Certification
MCSE Fanamafisana ny fahaiza-manao
Fanofanana MCSE - Tokony ho Fantatrao
Fanavotana ireo Voaro momba ny fampiofanana Microsoft Software Assurance (SA)